कोठा - एक केहि सार्वजनिक मा एक कोठा, यसलाई यहाँ हामी अक्सर अतिथि प्राप्त छ किनभने। तसर्थ, यसको भित्री धेरै ध्यान दिएर लग्नु गर्नुपर्छ। निस्सन्देह, सबै को पहिलो तपाईं पर्खाल वालपेपर र mebliruete कोठा भन्दा टाँस्न छ। अर्को चरण - पर्दे को छनोट। तिनीहरूले बाहिर खडा भन्दा, कोठा को समग्र शैली संग आदर्श संयुक्त गर्नुपर्छ। जो शैली समाधान तपाईँले चयन, हल गर्न pelmet पूर्ण उपयुक्त हुनेछ।
त्यसैले, जहाँ पर्दे को चयन सुरु गर्न? डिजाइनर एक शब्द मा कोठा को समग्र नजर वर्णन गर्न सल्लाह छन्। यो शब्द "क्लासिक" छ भने, pelmet कोठा लागि सिद्ध छ। पर्दे सिलना छन् बाट जो कपडा, भारी रसीला हुनुपर्छ। यो एक दरबार वा संग्रहालय संग सम्बन्धित छ गरौं। यस्तो मखमल, साटन, रेशम रूपमा सामाग्री ध्यान। सुरुमा, पातलो पर्दा organza, tulle वा खोक्रो, अलंकृत reticulum गरौं गर्न सकिन्छ। खैर, तपाईं शब्द "pelmet" फ्रेंच हामीलाई आए र छोटो तेर्सो पर्दा विशुद्ध सजावटी समारोह कार्य मतलब थाहा थिएन? पर्दे को यस प्रकारको edging र अन्य विशुद्ध सजावटी तत्व, धेरै Folds plissirovok छ किन कि छ।
रंग योजना - हल लागि Pelmet
तपाईं हल लागि pelmet खरिद गर्न दृढ इरादा संग सैलून आउन गर्नुभएको छ। तर यहाँ तपाईं को सामने स्वाभाविक प्रश्न उठाउनु: "अनि के रंग पर्दा हुनुपर्छ?" निस्सन्देह, रंग र ढाँचा पर्दे पहिलो वालपेपर संग संयुक्त गर्नुपर्छ। पर्खालहरु र असबाब भन्दा गाढा केही रंग लिनुपर्छ भनेर रंग pelmet याद गर्नुहोस्। धेरै मूल नजर पर्दे सीधा विपरीत रंग: कालो र सेतो, रातो र नीलो, पहेंलो र बैजनी। साथै, क्लासिक शैली परंपरागत छ ब्रश, fringe, Monumental पकड लिन्छ प्रशस्त समावेश छ।
सिद्धान्त मा, हार्ड pelmets हल लागि organically कुनै पनि शैली मा फिट। तपाईं घर देश को आत्मा मा सजाया? उत्कृष्ट। प्राकृतिक कपडे र तटस्थ रंग चयन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, असल प्यास्टेल रंग जस्तो हुनेछ।
तपाईं एक बालकनी जीवित कोठा छ भने, यो पक्कै पनि केही प्रतिबन्ध imposes। तपाईं भन्ने तथ्यलाई विचार गर्न आवश्यक छ बालकनी ढोका सधैं खोलियो गरिनेछ र बन्द, र पर्दे यसलाई रोक्न हुँदैन। के तपाईं पक्का हुनुहुन्छ भने तपाईं हल lambrequins सजाउनु यो धेरै लामो र रसीला थिएन भनेर निश्चित गर्न चाहन्छु। एक बालकनी संग एक कोठा लागि पर्दे र pelmets अलिकति अमिल्दो (को अलिकति छोटो ढोका द्वारा) हुन सक्छ।
आफ्नै पर्दे सी
तपाईं वित्तीय अफ्ठ्यारो अनुभव वा मौलिक स्टाइलिस्ट बारी गर्न चाहँदैनन् भने, त्यसपछि यसलाई आफ्नो हातमा पर्दे सी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई आवश्यक कपडा, अस्तर, एक सिलाई मेशिन, पाठ्यक्रम, रिबन, fringe, र। को पर्दे अलिकति अब आवश्यक भन्दा हुनुपर्छ त, धुने मा सामाग्री "सिट" केही भनेर नबिर्सनुहोस्। तपाईं सी शुरू गर्नु अघि, फलाम कपडे गर्न फलाम को एक टुक्रा प्रयास - यो कसरी हीट प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्। अन्यथा पर्दे यसलाई हल्का, राख्न हास्यास्पद हेर्नेछौं बनाउन तिनीहरूले सन्तुलित हो भनेर पक्का,: Folds गर्न विशेष ध्यान।
कसरी एक स्थान प्रदर्शन गर्न?
तारा टिभी श्रृंखला "Barvikha" र "पिता छोरी" वीर्य Pochivalov: व्यक्तिगत र रचनात्मक जीवनी
किन आगो को सपना
एक रेल संग स्कर्ट: विगत र वर्तमान
के खुट्टा मा नसाहरु गराउँछ?